Iyo mvura yeasidhi inogadzirwa: hunhu uye mhedzisiro | Network Meteorology
Inonaya sei acid mvura
ChiGerman Portillo | 01/07/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/06/2021 21:30 | Meteorology
Imwe yemhedzisiro yakakomba yekusvibisa mweya isitiidhi mvura. Iri idambudziko rakakomba rezvakatipoteredza rinokonzerwa nezviitiko zvevanhu mumaindasitiri. Kunyangwe mafirimu mazhinji iwe uchikwanisa kuona njodzi dzinokonzerwa nechiitiko ichi, nekuti vanhu havazive Inonaya sei acid mvura.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira chinyorwa ichi kukuudza iwe kuti sei mvura yeasidhi inoitika uye mhedzisiro yacho.
2 Inonaya sei acid mvura
3 Mhedzisiro yevanhu uye nharaunda
4 Mhinduro kune mvura inonaya
Mhando iyi yekunaya inoenderana nekusviba kwemhepo nekuti inoumbwa nekudyidzana kwemhepo mwando nesarufa dioxide, sarufa trioxide nedzimwe nitrogen oxides zviripo mumhepo. Iko kusunganidzwa kweaya magasi kunowedzera nezviitwa zvevanhu. Zvikasadaro, mvura yeasidhi inoitika mune mamwe mamiriro akasarudzika, sehutsi hunoburitswa panguva yekuputika kwegomo.
Aya magasi anobva muzvigadzirwa zvakaita semafuta, kumwe kutambisa, utsi hwefekitori, uye traffic mota. Ichi chiitiko chave chinetso pasi pano nekuda kwekuwanda kwayo kuwanda. Izvo zvinokonzeresa kukuvara kwezvinhu zvakasikwa uye hunhu hwevanhu hwekugadzira.
Kuti tizive kuti sei iine chinokanganisa pazvinhu zvakasikwa uye zvakagadzirwa nevanhu, tinofanira kunzwisisa kuti mvura inonaya iine asidi Panyaya yemvura inonaya iine acid, zvinogona kutaurwa kuti chakanangana nekusvibisa kwezvakatipoteredza zviitiko zvevanhu senge mashandiro emafekitori, nzvimbo dzeruzhinji uye kupisa mumba, magetsi magetsi, mota uye zvimwe zviitiko.
Zvinowanzo tendwa kuti kana isu tichitaura nezve mhedzisiro yemvura inonaya, tinotenda kuti hatisi isu chikonzero cheichi chiitiko. Muchokwadi, huwandu hwekuburitsa kwemaindasitiri kumuchadenga kwakasiyana neuwandu hwezvinhu zvinoburitswa nemunhu chaiye. Zvisinei, ichokwadi zvakare kuti kune vanhu vakawanda pasi pano kupfuura maindasitiri.
Izvi zvinoita kuti tifunge zvakare kana izvi zvikanganiso zvichinyatso kukonzerwa nekuitwa kwechinhu chose zvizere. Rangarira, chiitiko ichi ine carbon dioxide, inogona kuva sinou, chando, uye mhute. Kana iri mhute, inonzi acid fog uye inogona zvakare kukonzera njodzi dzehutano kana iwe uchifema.
Zvese izvi zvinoita kuti mvura iite acidic. Iyo pH yemvura inonaya inowanzove 5,6, asi iyo pH yemvura inonaya inowanzoita mashanu kana kunyangwe 5 kana iine acidic.. Kuti riumbike, mvura iri mumhepo inosangana nemusanganiswa wemagasi watakambotaura kare. Iwo aya magasi ayo pamwe chete nemvura anogadzira sulfuric acid, izvo zvinoita kuti mvura yemvura iwedzere kuva neacid. Mamwe maacidi maviri anoumbwa, senge sulfurous acid uye nitric acid. Kana mvura iyi ine acidic ikawira, inotanga kuparadza nharaunda yazviri.
Mhedzisiro yevanhu uye nharaunda
Iye zvino tonyatso tarisa pane zvinoitika kana mvura yeasidhi ikatanga kunaya. Inowira pasi, mvura, masango, zvivakwa, mota, vanhu, nezvimwe. Naizvozvi, isu tinogona kutotaura kuti nharaunda seyakashata.
Zvinosvibisa zvinoburitswa nekupiswa kwemafuta epeturu hazvisi chete zvinosvibisa nzvimbo yavanogadzirwa, asi zvinogona zvakare kufamba nzendo refu nemhepo, kusvika kuzviuru zvemakiromita. Isati yasangana nehunyoro, inova acidic uye inodonha semvura. Kunyangwe ichinzi acid mvura, iyi mvura inogona kuitika muchimiro chechando, chimvuramabwe, kana mhute. Zvese izvi zvinotitaurira kuti kuumbwa kwemvura ine asidhi kunogona kuitika mune imwe nzvimbo yenyika uye kuwira mune imwe nzvimbo.
Ichokwadi chekuti nyika isingasvibise inofanirwa kutambura nemhedzisiro yeimwe inoita, ndizvo izvo nyika iyoyo isingafanire kubvumidza. Kupfuura chero chinhu, nekuti iyi ndiyo mhedzisiro yemvura inonwisa mvura uye nyika dzipi dzisiri mhosva yekumwa kwevamwe vachatambura:
Mvura acidification: Iyo inokanganisa nharaunda inokonzeresa kukuvadza kwakanyanya kune ese zvipenyu mune zvese zviyero uye zvepasi minda. Dzese miti nemhuka zvinokanganiswa uye mvura haichanwe. Zvese izvi zvinotungamira mukuwedzera mune zvinotevera kurapwa uye kuwedzera kwemutengo wemvura yekunwa.
Zvinokonzera kukanganisa kwakakomba kune zvinomera: nzvimbo dzese dzesango nemasango zvakakanganisika padanho remiti nemhuka.
Ramba uchifunga kuti panguva iyo mvura inonaya yeasidhi inosanganisa zvimwe zvikamu zvemakemikari nezvimwe zvatove muvhu. Chokwadi ichi chinoguma chave kushayisa ivhu rezvinhu zvinovaka muviri. Mhedzisiro huru yeiyi ndeyekuti zvirimwa zvakawanda zvinofa uye mhuka dzinozvisimbisa pazvirimwa izvi dzinopedzisira dzafa nekuda kwechakakonzerwa neketani yetrophic.
Paradza hupenyu hwese utachiona ayo ane basa rekugadzirisa nitrogen. Izvi zvinokonzera nitrogen yakawanda mumamiriro ekunze.
Inokuvadza nzvimbo dzese dzakagadzirwa dzinoitwa nemunhu, zvichikonzera kukanganisa kwenguva mukufamba kwezvinhu zvakaita sehuni, plastiki nematombo. Iwe unongo fanirwa kuona kuti akawanda emifananidzo uye zvivakwa zvakakanganiswa zvakanyanya nekugara kuchidonha kwemvura yeacid munzvimbo dzakasviba.
Iwo maacidi aripo mumvura anokonzerawo kuwedzera kweye greenhouse effect.
Mhinduro kune mvura inonaya
Zvichipa iyi mhedzisiro, kune dzimwe nzira dzinogoneka dzakadai seinotevera:
Inoderedza huwandu hwesarufa senitrogen yekubuda mumafekitori, mota, kudziyisa, Etc.
Wedzera simba rinowedzerwazve uye nekuvandudza mashandiro etekinoroji kudzikisira chisi kumhepo.
Wedzera kudyiwa kweruzhinji rwekufambisa kudzikisa kushandiswa kwemota yakazvimiririra.
Kuderedza kushandiswa kwemagetsi mudzimba
Kuderedzwa kwekushandiswa kwemakemikari zvinhu zvezvirimwa uye zvekurima.
Dyara mimwe miti
Dzidzisa huwandu hwese hwevanhu kupinza hunhu hwakanaka hwehupenyu husina kusvibisa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvekuti mvura yeasidhi inoitika sei uye nemhedzisiro yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Inonaya sei acid mvura